Ganacsatada iyo rayidka Beledweyne oo dalbanaya in dib loo furo jidad muhiim ah oo la xiray – Radio Daljir
Diseembar 5, 2013 2:08 b 0
Beledweyne, December 5, 2013 – Ganacsatada iyo qaybaha bulshada ee magaalada Beledweyne ayaa cabasho ka keenay jidad dhowr ah oo xiran, tan iyo qaraxi waynaa ee dhowaan lala eegtay saldhiga booliska ee magaalada xaruunta u ah gobolka Hiiraan.
Qaybaha bulshada iyo ganacsatada oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xiritaanka jidadka magaalada Beledweyne ay caqabad ku yihiin isu socodka iyo ganacsiga.
Xaaji Cali Kaar oo ah gudoomiyaha ganacsatada gobolka Hiiraan ayaa ka dalbaday taliska booliska iyo maamulka gobolka inay furaan dhowr jid oo ku yaala Beledweyne, kuwaas oo la xiray markii weerar toos ah iyo qarax ismiidaamin ah lagu qaaday beledweyne bishii hore.
AMISOM iyo ciidamada dowladda ayaa jidadkaas xiray, markii ay weerarka tooska ah iyo qaraxa lagu qaaday saldhiga Beledweyne ay ku dhinteen 27 oo ay ku jiraan ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo ciidanka Jabuuti ee ku jira howl-galka.
7 ruux oo ku dhintay qarax ka dhacay Boosaaso iyo Puntland oo ku eedaysay Al-shabaab (Dhegeyso)